News – HIQ
Ruqsadaha Isgaarsiinta iyo Warbaahinta
Kadib go’aan Hay’adda Isgaarsiinta Qaranku (HIQ) soo saartay 17 Febaraayo 2020, oo la xiriiray ruqsadaha isgaarsiinta iyo warbaahinta, waxaa Sharciga Isgaarsiinta Qaranka iyo go’aankii HIQ u hogaansamay shirkadaha hoos ku xusan oo soo dalbaday rukhsadda Isgaarsiinta, Teknolojiyadda iyo Hirarka waqtigii loo talogaly oo ku ekaa 1 da Apriil 2020:
Shirkadaha Isgaarsiinta & Internetka
Rajo Cable TV
Waxaa lagu wargelinayaa shirkadaha adeegyada isgaarsiinta iyo warbaahinta bixiya in ay dhowraan una hogaansamaan Shuruucda iyo Xeer-nidaamiyaasha dalka lana ogolaandoonin in ay ruqsad la’aan wadanka uga shaqeeyaan.
By: admin 6 0
Maareeyaha Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka ayaa ka qeybgalaya Shirweynaha
Maareeyaha Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka ayaa ka qeybgalaya Shirweynaha Taleefoonnada Gacanta ee Adduunka oo ka furmay magaalada Barcelona ee dalka Spain.
Shirweynahan ayaa loogu talo galay in shirkadaha ganacsiga, hay’adaha isgaarsiinta iyo wasaaradaha, iyo dhammaan inta daneysa arrimaha isgaarsiinta ay isku weydaarsadaan waxyaabaha ku cusub isgaarsiinta iyo teknolojiyada adduunka.
Hannaanka wada-tashiyada xeer-nidaamiyeyasha isgaarsiinta & teknoolojiyada oo la furay
(Muqdisho, 1da Disembar, 2018) Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka (HIQ) ayaa si rasmi ah u daah-furtay hannaanka wada-tashiga xeer-nidaamiyeyaasha isgaarsiinta iyo teknolojiyada dalka, iyadoo munaasabaddaasi ay ka soo qeyb galeen dhammaan dhinacyada ay khuseyso.
Maareeyaha Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka, Mudane Cabdi Sheekh Axmed, ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in maanta la soo gaaray waqti ay SONIC – oo maamusha astaanta internetka ee dalkeena – ay si daah furan u qaadaneyso shirkado gudaha dalka ka shaqeeya oo diiwaangeliya astaanta.
“Maanta waxaan soo gaarnay in dotSO ay ku soo wareegtay dalka gudihiisa, lana qaadanayo shirkado Soomaaliyeed oo adeeggaas gaarsiiya magaalo kasta oo ka mid ah dalka, maadaama awal ay aad u koobnaayeen shirkadaha diiwaangeliya ee dalka ka shaqeeya, hase yeeshee lala sugayo in la sameeyo nidaam daah-furan oo lagu qaato kuwa cusub ka dib marka hawlaha farsamadu ay soo dhammaadaan,” ayuu yiri Maareeyuhu.